Santorini, agwaetiti Greek nke nwere ọdịda anyanwụ kachasị mma | Akụkọ Njem
Santorini, agwaetiti Greek nke nwere ọdịda anyanwụ mara mma
Susana Garcia | | Greece, Santorini
You maara kaadị ndị ahụ nke ụlọ ọcha na-acha anụnụ anụnụ n'elu ụlọ? Anyị niile ahụla eserese Greek mara mma, amaara nke ọma, nke ahụ bụkwa kpọmkwem ebe anyị ga-ekwu maka taa, Santorini. Bụ Agwaetiti Greek Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma, ebe ndị njem na-eto eto, na enweghị ọtụtụ ihe kpatara ya, ya na anyanwụ dara, ala ya mara mma na ọtụtụ ọrụ ya.
Ọfọn, anyị ka nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere agwaetiti ọkara ọnwa a nke dịrị otu a mgbe ntiwapụ nke 1650 BC. C., mgbe naanị mpaghara ọwụwa anyanwụ fọdụrụ. Ọ bụ otu n'ime Agwaetiti Cycladic dị na Oké Osimiri Aegean. On a agwaetiti ị pụrụ ịnụ ụtọ ikpọ echiche nke caldera, ebe ugwu mgbawa dị. Na mgbakwunye, enwere site na mkpọmkpọ ebe ochie ruo ụlọ ahịa ndị aka nka, ụsọ osimiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke iji ezumike ezumike.
1 Ga leta isi obodo, Fira
2 Nọrọ na-ele ọdịda anyanwụ
3 Ọrụ maka ezinụlọ dum
4 Saịtị Akrotiri
5 Usọ osimiri dị na Santorini
Ga leta isi obodo, Fira
Agwaetiti Santorini, nke nwere ọdịdị ya na ugwu ya, bụ otu n'ime ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama. Na isi obodo ya, Fira, anyị nwere ike ịnọ na họtel nwere echiche dị egwu, ebe ọ dabere na ugwu, yana site na ebe ị nwere ike iji foto kachasị mma ụlọ ọcha ndị nwere okirikiri na-acha anụnụ anụnụ. Obodo ahụ enweghị ike ịmatakwu mma, nke nwere ekpomeekpo Greek na-enweghị atụ, nke nwere ụlọ ọcha nuklia nke anwụ na-acha, yana ọnụ ụzọ na windo na-acha anụnụ anụnụ na-arụ ọrụ na akwa labyrinthine, nke e kere obere obere. Ọzọkwa ebe a bụ mbara ala kachasị mma maka ịnwụ anwụ.
Nke a bụkwa otu n'ime ebe dị ndụ karị, na ụlọ ọrụ aka ebe ị nwere ike ịzụta site na ọla na akwa. E nwere ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ withụ na-ahụkarị nri Greek. Na abalị ị nwere ike ịnụ ụtọ ikuku kacha mma. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ, n'ihi na anyị agaghị enwe nkụda mmụọ.
Nọrọ na-ele ọdịda anyanwụ
Mana ọ bụrụ na agwaetiti a pụta ihe, ọ bụ maka ịnye ọdịda anyanwụ kachasị ịtụnanya. Ebe kachasị mma iji hụ ha bụ mbara ihu eke na obere Obodo Immerivigli kilomita abụọ site na isi obodo, na Ugwu Scaros, ebe anyị nwekwara ike iji ohere ahụ mkpọmkpọ ebe nke ụlọ ochie.
Ebe ọzọ a ma ama ile anya mgbe anyanwụ dara bụ Ọmarịcha ọdụ ụgbọ mmiri nke Oia. Ga-achọpụta na ebe a bụ ebe ama ama, ebe ndị mmadụ na-ezukọ iji nwee ọ thisụ n'oge a. Artists n'ike mmụọ nsọ site a mara mma odida obodo na njem nleta na-ewere ha mma foto. Akara pụrụ iche.
Ọrụ maka ezinụlọ dum
N'agwaetiti a, ebe ị na-eme njem nleta, ị nwere ike ịme ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ga njem njem ịnyịnya ibu bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu, mana ị nwekwara ike ịga n'okporo ámá nke isi obodo ịzụta na obere ụlọ ahịa ndị aka ọrụ, ma ọ bụ mee njem ụgbọ mmiri gaa ugwu mgbawa na etiti caldera ebe enwere ike ịsa ahụ na mmiri ọkụ. N'ezie anyị agaghị agbụ na Santorini. Ma nke ahụ apụtaghị na anyị nwere ike ịme mmiri mmiri, ndagharị mmiri, ịga ije, kayak ma ọ bụ ịgagharị.
Nkwụnye ego a dị ezigbo mkpa, ọ dịkwa na ndịda agwaetiti ahụ. N'ime ya, foduru site na Bronze Age achọtala, ya mere ekwenyere na agwaetiti a bụ ebe dị mkpa n'oge ochie. Ọ bụ obodo e liri mgbe ugwu gbawara agbawa na-ewu ewu na nke achọpụtara na 1866. Ebe e liri ya, edebewo ya nke ọma, ya mere ọ bụ nnukwu nchọta, ma achọtala ọtụtụ ebe ahụ. ihe mepere anya Minoan. Enwere ụlọ na frescoes, yana ụlọ ụka, na ọtụtụ foduru nke e liri n'okpuru lava siri ike. You nwere ike ịbanye na saịtị ihe ochie na njem nlegharị anya, ọ bụ ezie na a kpọgara frescoes ahụ na National Archaeological Museum nke Athens maka nchekwa ha, yabụ anyị agaghị enwe ike ịhụ ha ebe ahụ, mana nleta ahụ ka kwesịrị ya.
Usọ osimiri dị na Santorini
N'ezie, ị gaghị echefu aha osimiri ndị dị n'àgwàetiti a, ebe ọ bụ otu n'ime ebe ndị mara mma nke agwaetiti Greek na-adọta ọtụtụ narị ndị njem nleta kwa afọ. Na Santorini enwere ọtụtụ osimiri, ụfọdụ na-eme njem nlegharị anya, ndị ọzọ na-ezoro ezo, mana ndị kwesịrị ịga leta. Osimiri Vlyhada dị ịtụnanya n'ihi mgbidi nkume ndị na-etolite ugwu, na-eme ka ọ dị mfe ịmata. E nwekwara osimiri uhie, n’akụkụ ọnụ ọnụ ugwu ndị nwere agba ndị a, na Akrotiri, na White osimiri, dị ya n’akụkụ, ya na okwute ndị nwere agwa dị ọcha. Ma ọ bụrụ na anyị na-achọ otu n'ime osimiri ndị jupụtara na ọrụ na ihe eji enyere ndụ aka, na nke enwere ikuku, nke ahụ bụ osimiri Kamari, na ndịda ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Santorini » Santorini, agwaetiti Greek nke nwere ọdịda anyanwụ mara mma
Na-eduga na ịnụ ụtọ New York n'oge ọkọchị
Wales: Asụsụ na Okpukpe